Akhri khudabadihii madaxweyne Xasan ka jeediyey booqashada madaxweynaha Turkiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri khudabadihii madaxweyne Xasan ka jeediyey booqashada madaxweynaha Turkiga
A warsame 26 January 2015
Khudbadaha munaasabadda booqashada Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ee Soomaaliya 25 Janaayo 2015
Furitaanka Terminaalka Cusub ee Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde
Marwada Madaxweyne Erdogan
Xubnaha Goleyaasha kala duwan ee
Mudaneyaal iyo Marwooyin:
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan Madaxweyne Erdogan ku soo dhoweeyo terminaalka cusub ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Laba sanno ka hor imaanshaha diyaaraddii ugu horeysey ee rakaab ee Turkiga ee hawada magaalada Muqdisho soo gasha, waxay calaamad u ahayd waa cusub oo u baryey Soomaaliya.
Tan iyo xiligaas Soomaaliya waxay ka baxdey xaaladdii la oran jirey ”lama tegi karo, waa waddan khatar ah oo qofna aan ku dhiiran karin inuu tego”, waxaasi oo dhan hadda way dhammaadeen, waxaana liiska ku darsantey Shirkadda Diyaaradaha Turkiga oo duulimaadyo joogta ah sameyneysa.
Mar kale imaanshaha diyaaraddaada gaarka waa xusuusin maalinle ah oo muujineysa sida ay uga soo reyneyso xaaladda Soomaaliya, kalsoonida lagu qabo, iyo deeqsinimada xad dhaafka ah ee Turkiga u u muujinayo shacabka iyo dalka Soomaaliya.
Dadku waxay yiraahdaan dareenka ugu horeeya mar walba waa muhiim! Waxaan filayaa in maanta furitaanka terminaalka cusub uu sameynayo dareen weyn oo aad u qiimo badan . Tani waa wax ka badan dhismo cusub iyo diyaarado badan oo halkan ka soo degi doona: tani waa fursad. Fursadda dhanka isku xirka ee dhismahan keenayo, waxay abuureysaa fursado badan oo ganacsi, fursado in la wadahadlo oo arrimo badan laga doodo, fursado dalxiis iyo in arrimaha dhaqanka wax la iska weydaarsado.
Dhismahan weyn ee cusub waxaa uu caddeyn u yahay sida ay u xooggan tahay saaxiibtinimada u dhexeysa Turkiga iyo Soomaaliya. Waxaan si weyn abaal ugu haynaa taageerada deeqsinimada leh ee sii socota ee aanu ka heleyno Madaxweyne Erdogan, dowladda iyo shacabka Turkiga.
Sida dalka Turkiga uu u noqday xarun soo kobceysa dhanka dalxiiska, ganacsiga iyo diblomaasiyadda, ayaa waxaan anaguna qabnaa riyo taa la mid ah oo ah in Soomaaliyana maalin maalmaha ka mid ah ay sidaas oo kale gaari doonto.
Waxaan albaabadeena u fureynaa dunida inteeda kale, waxaana rajeyneynaa in sidoo kale dunidana ay albaabadooda inoo furaan.
Furitaanka xarunta cusub ee Isbitaalka Culuunta Caafimaadka iyo Cilmibaarista ee Soomaaliya iyo Turkiga
Xubnaha Goleyaasha kala duwan ee Dowladda Federaalka Soomaaliya
Waxaa farxad weyn ii ah inaan Madaxweyne Erdogan ku soo dhoweeyo xaruntan cusub ee Isbitaalka Culuunta Caafimaadka iyo Cilmibaarista ee Soomaaliya iyo Turkiga wada leeyihiin.
Dalka Turkiga waxaa uu si weyn ugu lug lahaa adeegyada caafimaadka iyo tababarada ee Soomaaliya.
Tan iyo sannadkii 2012, inagoo gacan ka heleyna dowladda Turkiga, Ururka Bisha Cas iyo ururka Dhakhaatiirta Caalamiga ayaa waxaa inoo suuragashey in dib loo dhiso ama dib loo hawlgeliyo Isbitalka Digfeer, Isbitaalka Deva iyo Isbitaalka Shifa si ay u daboolaan baahida caafimaad ee muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Maanta oo la furayo Isbitaalka Culuunta Caafimaadka iyo Cilmibaarista ee Soomaaliya iyo Turkiga, ma ahan oo keliya in dowladda Turkiga ay Soomaaliya ka caawineyso sidii adeeg caafimaad oo tayo leh loogu fidin lahaa shacabka Sooomaaliyeed, balse waxaa iyana daba socota sidii loo tababari lahaa jiilka soo socda ee hawlwadeennada caafimaadka Soomaaliya.
Taageeradan waxay inoo saamaxaysaa in adeegyada iyo xirfadaha sida aadka ah loogu baahan yahay la gaarsiiyo dhammaan isbitaalada ku yaalla Soomaaliya,iyo inaan bilownoo nidaam qaran oo tayo leh, kaas oo an shacabka ugu fidineyno adeegga caafimaad ee ay u baahan yihiin.
Sida magaca uu muujinayo,xaruntan cusub ee Isbitaalka Culuunta Caafimaadka iyo Cilmibaarista ee Soomaaliya iyo Turkiga, waxay xaruntani gacan ka geysan doontaa hawlaha la xiriira cilmibaarista, xoojinta in si hufan oo aqoonsado nooca cudurka bukaanka, iyo in kor loo qaado waxqabadka adeegyada shaybaarka ee gudaha dalka.
Caafimaadka waxaa uu ka mid yahay xuquuqaha asaasiga ah ee aadmiga, waana mid ka mid ah waxyaabaha muhimadda kowaad laga siiyo Soomaaliya.
Waxaan si kal iyo lab ah ugu mahadcelinayaa Madaxweyne Erdogan, dowladda iyo shacabka Turkiga sida ay u garowsadeen, baahideena, isla markaana ay u muujiyeen inay ka go’an tahay inay naga taageeraan sidii nabad iyo horumar looga dhalin lahaa dalkeena.
çok teşekkür ederim! (Aad baad u mahadsan tihiin)
Shirka jaraa’iid ee uu madaxweynaha la qabtey Madaxweyne Erdogan
Dhowr mar ayaan maanta ku celceliyey ama u sheegay, haddana dhib iguma ahan inaan mar kale iraahdo: waxay ii ahayd farxad weyn inaan Muqdisho ku martigeliyo Madaxweyne Erdogan, Marwada Madaxweyne Erdogan iyo xubnaha kale ee wafdigiisa ka tirsan.
Wan ogahay in socdaalkan uu ahaa mid gaaban, kuna kooban Muqdisho. Waxan filayaa in safarka xiga inaan waqti badan isku heli doono, weliba laga yaabaa inaan ku wada raaxeysano mid ka mid ah xeebaha dalkeena ku yaalla, oo aan ku wada cunno kalluunka uu waddankeena hodanka ku yahay. … Waxan maqley inay jiraan waxyaabo badan oo aan wadaagno xeebaha caanka ah ee Turkiga!
Saaxiibtinimada Turkiga iyo Soomaaliya waa mid waqti badan soo jirey, laga soo bilaabo qarnigii 16aad, markaas oo uu jirey xiriir ka dhexeeya Boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo Saldannadii Adal ee Soomaaliya.
Waqtigan la joogo, dowladda Turkiga waxa ay sii cabsi la’aan ah u muujineysey sida ay uga go’an tahay taageerada horumar Soomaaliya laga hirgeliyo oo gacanta ugu jira amaba ay maamulayaan isla shacabka Soomaalida.
Turkiga ma sugin in xaaladda ay isbedesho ama soo hagaagto si ay maalgashi u sameeyaan, balse maalgashigooda waxaa uu gacan ka geystey in la abuuro xaalado wanaagsan oo keenaya xasilooni iyo kobac dhaqaale. Saaxiibtinimada iyo taageerada Turkiga u muujisey Soomaaliya waa arin abid si weyn loo xusi doono.
Dowladda Turkiga, oo kaashaneysa Dowladdda Federaalka Soomaaliya, waxay Soomaaliya ka bilaabeen mashaariic horumarineed oo kala duwan iyo kuwo la xiriira kaabeyaasha dhaqaalaha. Mashaariicdaas waxay isugu jiraan kuwa caafimaadka, daryeelka nadaafadda, dhismaha isbitaallada, dhismaha wadddooyinka iyo dayactirka garoonka diyaaradaha Caalamiga ee Aadan Caddde. Waxaa iyana dib loo dhisey masaajiddo horey ugu burburey dagaalkii sokeeye, waqtigan la joogana waxaa jira Soomaali badan oo wax ku barata Turkiga.
Maanta waxay ahayd maalin aad loo mashquulsan yahay ; waxaa inoo suuragashey oo keliya inaan booqano laba mashruuc horumarineed oo ku jira liiska mashaariicda badan ee Turkiga naga taageeray. Waxaan anagoo aad u faraxsan furney isbitaal cusub iyo weliba terminaalka cusub ee cajiibka ah ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Wadahadalka labada dhinac yeesheen waxaa diiradda lagu saarey xoojinta iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Turkiga, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo nabadgelyada. Waxaa labada dhinac ay kala saxiixdeen heshiisyo taabanaya dhinacyada iskaashiga milateriga iyo amniga, dhanka dhalinyarada iyo cayaaraha, gaadiidka badda, taageerada booliska iyo iskaashi cusub oo dhexmara Raadiyaha iyo Televishanka Qaranka ee Turkiga iyo Televishanka Qaranka Soomaaliya SNTV.
Anigoo ku hadlaya magaca Soomaaliya, Waxan Turkiga uga mahadcelinayaa gacanta ay inaga siineyso dhinacyada dhaqaalaha, militariga, arrrimaha bulshada, iskaashiga kaabeyaasha dhaqaalaha iyo gargaarka aadamiga. Shacabka Soomaaliyeed abaal weyn ayay u hayaan saaxiibtinimada kala dhexeeya Turkiga, waxaana rajeynayaa inuu sii xoogeysto xiriirka labadeena dal.
Degmada Deyniile oo ciidamada amaanku ku qabteen hub iyo dad laga shakiyey
Saddex nin oo loo heysto dilka oday ganacsi ku lahaa Xamarweyne oo lasoo bandhigay